६ समूहको परिसूचकमा सामान्य वृद्धि
कात्तिक ५, काठमाडौं । मंगलवारको कारोबारमा नेप्से २ दशमलव ४० अंक बढेर १ हजार १३४ दशमलव ७९ विन्दुमा पुगेको छ । १ हजार १३२ दशमलव ४५ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक साढे एक घण्टामा १ हजार १३० दशमलव २१ विन्दुसम्म ओर्लिएर अन्त्यमा बढेर बन्द भएको छ ।
यस दिन कारोबार भएका १५५ कम्पनीको ६ लाख ४५ हजार ४५३ कित्ता शेयरको रू. १६ करोड ५२ लाखभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । चाडपर्वको बीचको समय भएकाले पनि कारोबार रकम घट्न पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यस दिन कारोबार भएका ११ समूहको परिसूचकमा ६ समूहको परिसूचक बढेको छभने पाँच समूहको घटेको छ । बढ्नेमा बैंकिङ समूहको शून्य दशमलव ४३ प्रतिशत, जीवन बीमाको शून्य दशमलव ३८ प्रतिशत र जलविद्युतको शून्य दशमलव १५ प्रतिशत बढेको छ । उत्पादन तथा प्रशोधन, लघुवित्त र विकास बैंक समूहको परिसूचक सामान्य अंकले मात्र वृद्धि भएको छ । घट्नेमा होटल समूहको शून्य दशमलव ४५ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा समूहको शून्य शदमलव ४२ र ‘अन्य’ समूहको शून्य दशमलव ५४ प्रतिशत घटेको छ भने बाँकीको सामान्य अंकले घटेको छ ।
नबिल बैंकको सर्वाधिक रू. १ करोड ३२ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. ७५६ कायम भएको छ । दोस्रोमा प्रभु बैंकको रू. १ करोड ३ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । बैंकको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. २६४ कायम भएको छ ।
लक्ष्मी इक्वीटी फण्डको शेयर मूल्य ५ दशमलव ३० प्रतिशतले बढेको छ । उक्त फण्डको मूल्य प्रतिइकाई रू. ६ दशमलव ९६ कायम भएको छ । दोस्रोमा हिमालय डिष्टिलरीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. ५६ ले बढेर रू. १ हजार ४५८ कायम भएको छ ।